युवाले देशको लागि नसोचे कसले सोच्ने | bethanchokkhabar.com
युवाले देशको लागि नसोचे कसले सोच्ने
आइतबार, पौष २९, २०७५ | ४:०७:५० |
सागर रायमाझी, युवा नेता –
बनेपा : सकारात्मक सोच्ने युवा समाजमा कमै भेट्टिन्छन् । तर समाज परिर्वतनका लागि किशोरवस्था देखिनै लाग्ने युवाहरुले कहिल्यै समाजको कुभलोनै चिताएका हुँदैनन् । पछिल्लो समय काभ्रे बनेपामा सागर रायमाझी एउटा बहसमा सकृय भएर सहभागी हुने गर्दछन् । युवाहरुमा सदाचारिता,इमान्दारिता किन चाहियो भनेर उनीहरुको बहस हुने गरेको छ ।
हुनत सागर कम्युनिष्ट विचारधारावाट प्रभावित युवा हुन् । उनले युवा संघ काभ्रेको उपाध्यक्ष भएर सामाजिक काम गरिरहेका छन् । उनी सामाजिक काम भनेपछि हुरुक्कै हुन्छन् । उनको कार्यशैलीवाट प्रभावित हुने युवाहरुको जमातसमेत लामै छ । युवा सदाचारिता र राजनीति किन आवश्यक छन् भन्ने बिषयमा हामीले युवासंघका सकृय नेता एंव सामाजिक अभियानमा समेत कृयाशिल सागर रायमाझीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
० युवामा सदाचारिता किन आवश्यक छ ?
– युवामा मात्रै नभएर हरेक नागरिकमा सदाचारिताको आवश्यकता रहेको हुन्छ । अझ देश बनाउने महाअभियानमा लागेका युवाहरुमा सदाचारितानै आवश्यक हुन्छ ।
युवापुस्ता देश निर्माणको मेरुदण्ड हुन् । युवा पुस्तामा सदाचारिता हरायो भने समाजमा विकृती विसंगती ब्याप्त हुन्छ । जसले गर्दा सामाजिक मूल्य मान्यतामा ह्रास आँउछ । जसको असर सिंगो देशभरी पर्ने हुदा सबै युवाहरु सदाचारी बन्नु पर्छ । –युवामा पछिल्लो समय सदाचारिता हराएको किन होला ? तपाईंले प्रश्न गरे झै युवा पुस्तामा सदाचारिता हराएको छैन केही खस्केको चाहिँ हो । यसका केही कारणहरु छन जस्तै देखासिखी राजनैतिक अस्थिरता , पदलोलुप्तता , सामाजिक संजालको बढ्दो दुरुपयोग र बेरोजगार त्यस्तै बढ्दो वैदेशिक प्रभाव ले गर्दा यस्तो परिस्थिति देखा परेको हो अबको केही बर्षमा सबै युवा सदाचारी बन्ने छन र बनाउन तपाई हामी सबैको कर्तव्य हो । त्यसमा तपाई हामी सबै सकृय बनेर लाग्न आवश्यक रहेको छ ।
० भ्रष्टाचार छोप्न युवाहरू राजनीति मा लाग्छन् हो ?
– मलाई तपाईंको प्रश्नले निक्कै दुखीत तुल्यायो । युवाहरुले कहिले भ्रष्ट्राचार छोप्न रोप्न राजनीति गर्दैनन् । जब समाजमा देखिने बिकृती बिसङ्गतीका विरुद्ध बोल्दा बोल्दै एउटा युवा राजनीतिमा समाज परिवर्तनको हेतुले लागेको हुन्छ । तपाईंले कुन आधारमा यो प्रश्न गर्नु भो मलाई थाहा छैन तर पछिल्लो समय देखिएका केहि अपवाद बाहेक युवा पुस्ता समाज परिवर्तन को आन्दोलन मा अग्र पक्तिमा रहेर लड्ने युवा पुस्ता कसरी भ्रष्टाचार छोप्न राजनीतिमा लाग्छन् होला यो सोच्न समेत नसकिने बिषय हो ? –युवा किन व्यावसायिक बन्न नसकेको होलान् ?
यसका केही कारण हरुछन् । जस्तै हामीले लिएको शिक्षा व्यावसायिक शिक्षा भएन अर्को राज्यमा हुने चाडो चाडो राजनीति परिवर्तन र अस्थिरता ,राज्यको नीति र कार्यक्रम युवा मैत्री नहुन र लगानी मैत्रीपुर्ण बाताबरण राज्यले राज्यले निर्माण गर्न नसक्नु , उत्पादन भएका बस्तुले उचित बजार नपाउनु अर्को वैदेशिक रोजगार को प्रभाव हुन । तर केपी ओलीको सरकारले जसरी युवा मैत्रीपुर्ण बाताबरण बनाउदै छ मलाई विश्वास छ अब को केही बर्षमा कोहि युवा परिवार छोडेर जीवन निर्भाह गर्न बिदेश जानू पर्ने अवस्था रहदैन ।
० युवाहरु दलको पछि लाग्ने भएकाले युवा अधिकार छायामा परेको हो ?
– युवा अधिकार छायामा परेकै त भन्न मिल्दैन तथापी नेपालमा चाडो चाडो हुने राजनैतिक परिवर्तन र अस्थिरता ले गर्दा त्यस्तो लागेको हो । धेरै बर्ष को त्याग तपस्या र बलिदान ले राजनैतिक परिवर्तन सङ्गै युवा को हक अधिकार सुनिश्चित भएको छ । अहिले स्थीर सरकार आएको छ । अहिले केही कानुन हरु बन्दै छ त्यसकारन सरकार ले भन्या जस्तो गति लिन सकिरहेको छैन अबको केही महिना पछि हामी ले हाम्रो हक अधिकार ब्यबहारिक रुपमै प्राप्त गर्दै छौ तसर्थ राजनीति बेगर ती उपलब्धि हासिल हुन्न । अर्को कुरा राजनैतिक परिवर्तन बिना केही संभावना थिएन विगतमा तसर्थ राजनैतिक पार्टी ले युवा को हक अधिकार स्थापित गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान दिएकाले युवाहरु दलको पछि लागेका हुन जस्तो लाग्छ ।
० राजनीति केहो ? यो किन आवश्यक छ ?
– सरल भाषामा भन्ने हो भने राजनीति सबै नितिहरुको मुल नीति हो । राजनीति एउटा समाज बिज्ञान हो । समाजको अध्ययन ,राज्य सञ्चालन पद्धति ,समाजका हर कुरा राजनीति भित्र अटाउने हुदा राजनीति आवश्यक छ ।
० युवा हरु राजनीतिमा के पाउन सक्रिय बन्छन् होला ?
– राजनीति नितिहरुको मुल नीति हुदा राजनीति भन्दा कोहि अछुतो रहदैन । त्यस माथी राजनीति एउटा समाज सेवा पनि भएकाले राजनीति मा लागेर समाज परिवर्तन गर्न युवा पुस्ता आतुर हुन्छन् । केही अपवाद बाहेक युवा पुस्ता केही प्राप्ति भन्दा पनि समाज परिवर्तन को लागि राजनीतिमा होमिएको पाउछु । राजनीतिमा युवा पुस्ताले सहभागी जनाउनु राम्रो कुरा हो सबैले सक्रिय राजनीति गर्नु पर्छ भन्ने छैन तर राजनीति चाहिँ सबैले बुझ्दा राम्रो हुन्छ ।
० अन्त्यमा पत्रिका मार्फत ?
– थोरै भए पनि आफ्नो कुरा तपाईंको संचार माध्यम बाट अभिब्यत गर्न दिनु भएकोमा तपाई र तपाईंको संचार माध्यम लाई धेरै धेरै धन्यवाद सहित हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु । आजको खबर चौतारी साप्ताहिकमा प्रकाशित छ ।